Nhau - VOLVO KUSVIRA ZVINOSHANDISWA SHANGHAI KURIMA ZVINOGONESESA KUTI VADZIDZISE PAMUSORO 40,000TH EQUIPMENT
VOLVO KUSVIRA Midziyo SHANGHAI KURIMA ZVINOGONESA KUDZORA PASI PANE 40,000TH EQUIPMENT
Musi waZvita 23, 2020, iyo 40,000th yuniti inogadzirwa neVolvo Construction Equipment's Shanghai fekitori yakaburitsa zviri pamutemo kubva pagungano, zvichiratidza chimwe chiitiko cheVolvo Construction Equipment muChina kwemakore gumi nemasere. Volvo CE China manejimendi timu, vamiririri vevashandi uye vamiririri vamiririri vakapinda chiitiko chepa-saiti pamwe chete kuzopemberera iyo yekubwinya nguva.
Iyo 40,000th Volvo Construction Equipment Shanghai chirimwa chakabudirira kuburitsa kubva pagungano mutsetse.
Li Yan, Mutevedzeri weMutungamiriri uye General Manager weShanghai Plant yeVolvo Construction Equipment (China) Co, Ltd., akati: "Kubva pakuunzwa kwekutanga excavator muna 2003 kuenda kuVolvo Construction Equipment Shanghai muna 2018 Chibereko che30,000th che fekitori yakabvisa pamutsetse wekugadzira, uye Volvo Construction Equipment yapedza makore gumi nemashanu ichiita chivimbo chedu chakasimba mukudzamisa musika weChinese. Makore maviri chete gare gare, kugadzirwa kwese kweiyo fekitori yeShanghai kwakapfuura mucherechedzo makumi mana, zvichiratidza kuti tiri kugonesa kugona kwekuita, Wana mhedzisiro yakakosha mukutungamira kwekugadzira manejimendi. Izvi hazvipatsanurike kubva mukubatana kwechokwadi pakati pezvikwata zvakasiyana siyana zvekuvaka muChina, kuedza kwevashandi vese, uye kuvimbika kwevatengi. "
Sechikamu chakakosha cheVolvo Construction Equipment yepasirese kugadzirwa system Kubva payakagadzwa, Volvo CE's Shanghai chirimwa chagara chakavakirwa pakuchengeteka, chinotungamirwa nekugona, uye inotungamirwa nehunyanzvi. Iine kugona kwayo kugona kugadzira uye mhando yechigadzirwa, yakapa vimbiso yakasimba yekambani inoramba ichiwedzera mashandiro ayo muChina. Panyaya yekugadzirwa kwemaitiro kukwidziridzwa uye kuchengetedzeka, kugona kwekugadzira kweiyo fekitori yeShanghai kwakasvetuka kubva kumatanho ekutanga matanhatu maawa masere ese kusvika kumatanho makumi maviri neshanu makumi maviri neshanu maawa masere ese, kuwedzera kanokwana kuita kashanu; kubva muna Zvita 23 gore rino, musangano wekusangana wefekitori yeShanghai wakwanisa kusvika Rekodhi remazuva zviuru zvitatu zvisina tsaona rinosimbisa hwaro hwakasimba hwechengetedzo. Kwemakore kubva pakagadzwa, Volvo Construction Equipment Shanghai yanga ichirumbidzwa nemhando dzese dzehupenyu nekuda kwehunhu hwayo hwechigadzirwa uye mhando yepamusoro yevashandi. Muna 2013, fekitari paakavapa ari Shanghai Quality Gold Award; gore rakatevera, timu yemusangano yemusangano yemusangano yakapihwa zita rekuti "National Worker Pioneer"; mu2018, fekitori yeShanghai yakatumidzwa seyuniti yemhando yekuchengetwa kwevashandi muJinqiao Economic uye Technological Development Zone.
Makumi mana emakumi mana ari kure nemagumo, asi ndipo chaipo pekutangira panogadzirwa chiShanghai danho idzva mukusimudzira bhizinesi. Muna 2021, iwo akateedzana matsva ezvicherwa, pamwe chete neD akateedzera akateedzana parizvino mukugadzirwa, achasangana zvinoshanduka zvinowaniswa zvidimbu zvakasiyana zvezvigadzirwa zvevatengi veChinese kuburikidza nechikwata chechigadzirwa. Mune ramangwana, Volvo Construction Equipment Shanghai Plant ichaumbawo mubatanidzwa neLinyi Plant, Jinan R&D Center, Kushambadzira uye Kutengesa, neShanghai Remanufacturing Center, vachishandisa zvakanakira tekinoroji yeVolvo Construction Equipment wepasi rese kugona uye kugona kwemuno kugadzira kuunza hunyanzvi uye Inovandudza uye inoenderera. zvigadzirwa uye masevhisi anosimudzira kukwidziridzwa kweChina yekuvaka michini indasitiri uye jekiseni hutsva hwakasimba muhupfumi nehupfumi hweChina. (Ichi chinyorwa chinobva kuVolvo Construction Equipment)